Soomaaliya oo wayn doonto $329 oo kabka Miisaaniyada ah. - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Soomaaliya oo wayn doonto $329 oo kabka Miisaaniyada ah.
Soomaaliya oo wayn doonto $329 oo kabka Miisaaniyada ah.
Xasaradda siyaasadda iyo isaaminaad la’aanta ka dhax- taagan waxay sababidoontaa inay saameyso dhaqaalaha qaranaka Maadama Dowladda soomaaliya ay ku tiirsanatahay taageerada beesha caalamaka iyo dowlado saaxiibo ah.
Sida ay qabaan dadka Siyaasadda kafaaloda waxeey ku tilmaameen M/weyne Farmaajo diidmadiisa heshiis wada-ogol ama ka tanaasulid la’aanta qodobada horjoogsiga ku ah inla hirgaliyo doorasho lagu wadaqanacsan yahay, taasi waxay horseedeysaa dhaqaalo xumo.
Bal dhab u fiiri- Miisaaniyaada sanadkan 2021 waa in kabadan $400 Milyan, 55% waxaa laga filayaa inay ka timaado taageerada caalamaka Sido kale IMF waxay ansaxisay $329 Milyan oo lagu bixinaayo mashruuca SPN2.
Habkaan lacagtaa lagu bixinaayo oo ah habka boqoleyada sanadada 2020/2021 iyo 2022, Nidaamka IMF ay lacagtaan ku yabooheyso waxaa la qoondeeyaya in lagu bixiyo habka kabida nidaamka Miisaaniyad Somalia .
IMF/WB waxeey ku heshiiyeen in taageeradaas lasiiyo dowladda si ay ugu talaabasato xasilooni siyaasad , amaan iyo horumar, Ayadoo laga duulayo arintaa ayaa loogu talagalay in lagu maamulo dhaqaalahaas sida lagu cadeeyay Ducmentiga lagu bixixiyay mashruuca kaalmada ee lagu horamrinaayo taabo-galinta heyadaha dowladda si ay u gaaran Maamul wanaag , horumarinta Mashaariicda , xasiloonida iyo sugida amaanka.
Kabka Dhaqaalaha waxaa maamulkeeda lasoconayo World Bank , dowladda federalkana sida ay doonto dhaqaalaha uma maamulankarto . Dhaqaalaha kabidda waxaa lagu bixinayaa qoondaha mashariicda lagu ansaxiayay miisaaniayadda sanadlaha.
Waxaa xaqiiqa ah in dowladda M/weyne Farmaajo aysan laheyn wax xulasho ah , dhaqaalahaana ayan lagu dalbankarin in lagu bixiyo Madaxkale & mashruuc aan hore lo ansixin.
Hadabba, Talaabooyinka ay Beesha caalamaka ay qaadeyso waxay u badantahay in M/weyne Farmaajo ay u caqli celiso ogolaadana inuu saxiixo go’aanklii M/weyne Xasan Sheekh uu horay horay Saxiixay.
Haddii heshiis uu aqabaliwaayo , waxaa ka dhalandoonto in talaaabo kale ay qaadidoonto beesha caalamka, waxaa hadda lawadaa dadaalo waqti lagu siinaayo M/weyne Farmaajo inuu si furan u aqbalo in dalka laga hirgaliyo muddo 3 bil ah doorasho xor xalaala ah.
Heyadaha Amaanka dowladda federaalka ay banaanaka ka joogaan holwaha Siyaasada & Faragalinta doorashada, Si looga baaqsado in doorashada dalka looboobo M/weyne Farmaajo .
Isku day kasto uu sameeyo M/weyne Farmaajo heshiiska lagu gaari doono Xalane uu kabaxo sida dhaqankiisa ah, ama uu ka meermeero hirgalinta heshiiska Waxaa halkaa ka cadaaneyso in taabagalinta nidaamka dowladnimo iyo maamul wanaag uunan jirin , Arrintaana waxaa ka dhalaneyso in laqaado talaabo lagu xayiraayo dhaqaalaha kabidda ay dowladda federlaka ku tiirsantahay.
Waxayna saamaneyn doontaa taageerada mashaariicada aan khuseynin Samafalka sida Caafimaadka , Waxbarashada, waxay sitoos ah u saameyndoontaa mushaaraadka shaqaalaha rayidka , kabidda miisaaniyadda amaanaka iyo xasiloonida.
Waxaa muuqanaayo dowlado ay kamidyihii US, Norway , Turkey iyo EU inay walaac ka muujiyeen habdhaqanka M/weyne Farmaajo waxeeyna soojeediyeen inay si farasamo ah u joojinayaan dhaqaalaha kabidda ilaa laga qabanyo doorasho Xor oo xalaal ah loowada simanayahay isla markaana ayka wadaqeyb qaataan dhamaan saamileeyda siyaasadda.
Hadaba M/weyne Farmaajo waxa uu qorsheeynayaa in dhaqaalaha ganacsatada Soomaaliyeed uu ku tiirsanaado , kuna siiwado howlaha dowladda si uu ubixiyo lacagaha howl fududeynta Farmaajo loogu shaqeeyo, waxaa ugu daran lacaga uu ku bixiyo baraha bulshada inay ka go’ado.
Ganacsatad soomaaliyeed , oo inta ay xasaradda taagan tahay waxaa lagudboon ineeysan qeyb ka noqon , hurinta colaadda ka aloosan dalka isla markaana ka fiirsadaan bixinta canshuurta loo yaqaano maacaash macaashka .
Sido kale waxaa intaasi sii dheer Ganacsatada waxeey wajahayaan cadaadis uga imaanayo Hey’adaha Maaliyada dalka taaso qasab uga qaadan deyn si ay loogu fududeeyo howlaha dowlada aan sharciyada heesan.
Waxaan xasuusinayaa Ganacsatada soomaaliyeed aysan hadhow sharciyad u heesan deynta laga qaato waqtiga kala guurka oo ayna wayn doonaan lacagihii ay deymiyeen dowlada maadama sharciyad deen ku dalban karto xukuumada ma jirto oo mudo xileedkooda wuxuu dhacay 7 February 2021.
Hadii aad ku fikireysid waa saaxiibkaa , kursigga xoog kuheesta , ogow ganacsade waxaad ka mid noqoneysaa kuwa dalka burburinaayo, waxaadna dhiirigalisay colaad , kolayna waxay saameyndoontaa dhaqaalahaada iyo dadkaada.
Xigasho Raascaseer https://raascaseer.com/